Muxuu Jurgen Klopp Ololihii Kooxdiisa Liverpool Looga Horjoogsanayay Premier League Ee Fashilka Ku Soo Dhamaaday? – Gool24.Net
Muxuu Jurgen Klopp Ololihii Kooxdiisa Liverpool Looga Horjoogsanayay Premier League Ee Fashilka Ku Soo Dhamaaday?
Kooxda Liverpool waxaa maanta si rasmi ah loogu xaqiijiyay in ay soo dhamaatay sheekadii ugu walwalka badnayd ee soo haysatay muddo laba bilood ah ee kansalaada xili ciyaareedka kadib markii ay dhamaan 20 ka kooxood ee Premier League ay maanta si aan kala sooc lahayn iskugu raaceen in barri tababarka lagu soo wada laabto.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa muddadii lagu jiray go’doonka Fayraska waxa uu ka quusay fikradihii badnaa ee maalin kasta ay dadka qaar ku soo jeedinayeen in xili ciyaareedka waxba kama jiraan laga dhigo.
Laakiin markii uu maanta shirkii kooxaha Premier league ka soo qaatay damaanadii ugu danbaysay ee dhamaystirka xili ciyaareedka waxa uu Jurgen Klopp ka hadlay dareenkiisa maalmihii la soo dhaafay ee ku adkaa kooxdiisa Reds.
Jurgen Klopp ayaa la yaabay dadkii badnaa ee u ololaynayay in xili ciyaareedka waxba kama jiraan laga dhigo wuxuuna xusay in aanu garanayn sababta iyada oo boqolkiiba 76% la ciyaaray kulamadii xili ciyaareedka loo doonayay in waxba kama jiraan laga dhigo.
Klopp ayaa sheegay in kooxdiisa Liverpool ay cadaalad daro wayn u arki lahayd haddii dadkii u ololeeyay in xili ciyaareedka waxba kama jiraan laga dhigaa ay guulaysan lahaayeen balse hadda waxaa loo damaanad qaaday in ay Chanpionska noqon doonaan waqti aan fogayn.
Jurgen Klopp iyo kooxdiisa Liverpool ayaa hadda isku diyaarinaysa in ay garoonka dhexdiisa ugu guulaystaan koobkoodii 19 aad ee horyaalka Ingiriiska halkii markii hore ay dadka qaar soo jeedinayeen in xili ciyaareedka la joojiyo oo Reds koobka layska siiyo halka kuwo kale ay doonayeen in Reds la qalbi jabiyo.
Jurgen Klopp oo arintan ugu danbayn ka jawaabaya ayaa yidhi: “Waxaa jiray hadal ay dadka qaar ku doonayeen in xiil ciyaareedka waxba kama jiraan looga digo. Sidaa daraadeed waxaad ka fikriraysaa : Huh? Waxaan soo ciyaarnay boqolkiiba 76% xili ciyaareedka waxaanad doonaysaa in aad waxa masaxdo?”.
Klopp oo dareenka aragtidiisa dhabta ah ee haddii xili ciyaareedka la kansali lahaa soo bandhigay wuxuuna yidhi: “Aniga shaqsi ahaan waxay taasi noqon kari lahayd wax aan u arki lahaa caddaalad daro ee waa kaliya in la sheegay in taasi ayna dhicin”.
Klopp ayaa sharxaad ka bixiyay sababta uu u arkayay in ayna sinaba kooxdiisu koobka ku waayi karin xili ciyaareedkan wuxuuna yidhi: “Waxaanu kaalinta kowaad kaga jirnaa miiska kulamadii minanka, waxaanu kaalinta kowaad kaga jirnaa miiska kulamadii martida ahaa, waa xili ciyaareed ay qasab tahay in aanu Championska noqono”.
“La tacaalida qalalaasuhu waa shayga ugu muhiimsan, laakiin taas micnaheedu ma aha in waxyaabaha khaaska ahi ayna muhiim ahayn oo ay sababtu tahay kaliya in ayna muhiimad yar leeyihiin”. ayuu Klopp hadalkiisa raaciyay.
Klopp oo qiraya in ayna kooxdiisu Liverpool qaadan karteen haddii xili ciyaareedka waxba kama jiraan laga dhigi lahaa ayaa yidhi: “Ma awoodno anagu in aanu wax walba isku diyaarin karno, laakiin waxaa markastaba waajib igu ahayd in aan falcelin bixiyo. Taasi waa qaybta ugu wayn ee noloshayda ee ka falcelinta waxyaabaha aan la filayn”.
Klopp oo ka hadlaya su’aalihii badnaa ee la waydiin jiray ayaa yidhi: “Dadku waxay sheegayaan: “Sideed u awoodaa in aad ka fikirto kubbada cagta ee waqtiga ay dadku halkaas ku dhimanayaan? Ma jirto cid taas samaynaysaa, laakiin sida qayb kasta oo ganacsiga ka mid ah, waxaa waajib inagu ah in aynu isku diyaarino waqtiga ka danbeeya, sababtoo ah dabcan way imanaysaa”.
Barri galinka danbe waxay dhamaan kooxaha premier league ku soo laaban doonaan tababarka waana wajiga kowaad ee soo laabashada xili ciyaareedka Premier League waxaana la shaacin doonaa baadhitaanada lagu sameeyay xidigaha kooxaha Premier league.
18/05/2020 at 10:01 pm
Dabcan qofkasta oo aan caadifadda kafog wuu u xukumilahaa liverpool in koobka lasiiyo maadama sharciga barimarligaha uu sheegayo in hadii laciyaaro 75% kulamadiilaciyaaro aanan lakansalikarayn